कसरी हुन्छ फेसबुक ह्याक, कसरी बच्ने ?
मुख्य पृष्ठविज्ञान प्रविधिकसरी हुन्छ फेसबुक ह्याक, कसरी बच्ने ?
काठमाडाैँ / गत साता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अभिनेता दीपकराज गिरीले दीपाश्री निराैलाको फेसुबक एकाउन्ट ह्याक भएको जानकारी गराएका थिए । उनले दीपाश्रीसहित कलाकार सरोज खनालको पनि फेसबुक ह्याक भएको बताएका थिए । उनले ह्याकरले चलचित्रकर्मीको फेसबुक ह्याक गर्दै पैसा माग्न थालेको भन्दै ह्याकरबाट सर्तक रहन सबैलाई सचेत पनि गराएका थिए ।
प्रविधिका कारण अहिले आममानिसको जीवन धेरै सहज बन्दै गएको छ । परम्परागत शैलीमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । नयाँ-नयाँ प्रविधिले अवसरका ढाेकाहरू खुला गरेसँगै केही दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ । हामीले प्रविधिलाई जति विस्तृत रुपमा बुझ्दै जान्छौँ, उति नै अचम्म लाग्छ । नाङ्गो आँखाले देखिने प्रविधि जति सहज र राम्रो छ, गहिरिएर बुझ्दा उतिनै डरलाग्दो र जोखिमपूर्ण छ । जुन सामान्य मानिसको बुझाइभन्दा धेरै टाढा छ ।
पछिल्लो समय फेसबुक ह्याक हुने घटना सामान्य जस्तै बनिसक्यो । करोडौँको सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ताहरू रहेको फेसबुकका धेरै फाइदा छन् । हामी फेसबुकमा कैयौँ व्यक्तिगत र संस्थागत डाटाहरू समेत राख्ने गर्छौं । जुन डाटाहरू फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुनेबित्तिकै ह्याकरहरूले चोर्न सक्छन् ।
फेसबुकले एकाउन्ट होल्डरहरू ह्याकको समस्यामा नपरून् भनेर थुप्रै एप बनाएको छ । तैपनि दैनिकजसो थुप्रै मानिसका फेसबुक ह्याक भएका घटना सुन्नमा आइरहेका छन् । कैयौँपटक त फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गरेर डाटा चोरेर लगिसक्दा पनि युजरले पत्तोसम्म पाउँदैनन् ।
कसरी हुन्छ फेसबुक ह्याक ?
अधिकांश सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार आफ्नो व्यक्तिगत सूचना अरूसँग बाँड्नु फेसबुक ह्याक हुने पहिलो माध्यम हो ।
दोस्रो कारण फेसबुकमा आउने गरेको फेक फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गर्नु हो । हामी जब कुनै ह्याकरको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गर्छाैँ, त्यतिखेरै ह्याकर्सको आधाभन्दा बढी काम सकिन्छ । कहिलेकाहीँ म्यासेन्जरमा आएका अनैतिक लिङ्कहरू नबुझी खोल्दा पनि आइडी ह्याक हुने सम्भावना रहन्छ ।
पासवर्ड राख्दा अधिकांश प्रयोगकर्ताले सजिलैसँग सम्झन सक्ने र अरु व्यक्तिहरूले सजिलैसँग अनुमान लगाउन सक्ने प्रकारका पासवर्डहरू राख्ने गरेको भेटिन्छ ।
यस्ता सजिलै अनुमान लगाउन सकिने पासवर्डको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले आफ्नो अनलाइन गोपनीयता र संवेदनशील डेटाहरूलाई जोखिममा राखिरहेका हुन्छन् । त्यसैले निकै धेरै प्रचलनमा आएका पासवर्ड प्रयोग नगर्नु उचित हुन्छ ।
हरेक प्रयोगकर्ताको पासवर्ड सकेसम्म बेग्लै हुनुपर्छ र साधारण व्यक्तिले सजिलै अनुमान लगाउन नसक्ने प्रकारको हुनुपर्छ । हामीले फेसबुक खोल्दा सहज पासवर्ड र फोन नम्बर राख्दा पनि आइडी ह्याक हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सार्वजनिक र अन्य कुनै व्यक्तिको कम्प्युटरबाट आफ्नो अकाउन्ट लग आउट नगर्दा पनि फेसबुक ह्याक हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । सार्वजनिक कम्प्युटरहरू, जस्तैः साइबरमा, फेसबुक वा कुनै पनि अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेपछि लगआउट नगर्ने । यसैगरी धेरै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने कम्प्युटरमा पासवर्ड सेभ गर्ने । अरू कसैको कम्प्युटरबाट आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा प्राइभेट ब्राउजर नखोली चलाउँदा ब्राउजरमा सेभ भएको हिस्ट्रीले सहजै फेसबुक ह्याक हुन सक्छ ।
फेसबुकको सेटिङमा गएर टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन राख्दा कुनै नयाँ फोन अथवा कम्प्युटरमा फेसबुक लगइन गर्दा युजरको फोन नम्बरमा कोड म्यासेज जान्छ । सोही कोड राखेर खोल्दा मात्र उसका आइडी लगइन हुन्छ । त्यसो गर्दा युजरलाई आफ्नो एकाउन्ट कता लगइन भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुन्छ ।
यदि युजरले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन युज गरेको छैन भने फेसबुक ह्याकर्सलाई फेसबुक ह्याक गर्न निकै सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
विज्ञहरूका अनुसार आफूले प्रयोग नगर्ने फोन नम्बर अथवा इमेल आइडी राखेर फेसबुक प्रयोग गर्दा पनि फेसबुक ह्याक हुने सम्भावना रहन्छ ।